Parafin (ဖယောင်းဆီ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Parafin (ဖယောင်းဆီ)
Parafin (ဖယောင်းဆီ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Parafin (ဖယောင်းဆီ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Parafin (ဖယောင်းဆီ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ဖယောင်းဆီ ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်မှာ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေရန်၊ ရေဓါတ်ဖြည့်ရန်နှင့် အရေးအပြားကို ကာကွယ်ရန်၊ ကျိန်းစပ်ခြင်းများကို သက်သာစေရန် အထူးသဖြင့် အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းများတွင် အသုံးပြုပါသည်။
Parafin (ဖယောင်းဆီ) ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲ
ဖြစ်နေသည့်အရေပြားနေရာတွင် လိုအပ်သလို သို့မဟုတ် ဆရာဝန်မှညွှန်ကြားသလို လိမ်းပေးပြီး ညင်ညင်သာသာ နှိပ်နယ်ပေးခြင်း၊ နှံ့စပ်အောင်လိမ်းပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။
အာနိသင်အပြည့်အဝရရှိရန် ဆေးကို မှန်မှန်အသုံးပြုရပါမည်။
နေ့စဉ် တူညီသည့်အချိန်တွင်သာ အသုံးပြုရန် သတိထားပါ။ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ပြောသည့်အတိုင်း လိုက်နာပါ။ တစ်ချို့သော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများသည် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမည့် ဆေးပမာဏအတိုင်း လိုက်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Parafin (ဖယောင်းဆီ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ကလေးများ မမြင်နိုင် လက်လှမ်းမမီနိုင်သည့် နေရာများတွင်ထားပါ။
အဖုံးကိုသေချာပိတ်ပါ။ မီးလောင်လွယ်ပါသည်။ နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိခြင်းကို ရှောင်ပါ။ ဆေးဗူးကုန်သွားလျှင်တောင် အပူချိန် ၅၀ စင်တီဂရိတ်ရှိ အပူချိန်နှင့် ထိတွေ့ခြင်း၊ ဗူးခွံကို ထိုးဖောက်ခြင်း၊ မီးရှို့ခြင်းမလုပ်ပါနှင့်။ မီးတောက်ပေါ် သို့မဟုတ် ပူသောအရာများအပေါ် ဖြန်းခြင်းမလုပ်ရပါ။
၂၅ စင်တီဂရိတ်အထက်တွင် မသိုလှောင်ရပါ။ ဗူးအခြေတွင်ပါသော ကုန်ဆုံးရက်ကိုကျော်လွန်ပြီး မသုံးပါနှင့်။ ကုန်ဆုံးရက်ဆိုသည်မှာ ဖော်ပြထားသည့်လ ကျော်သွားပါက ဒိတ်ကုန်သွားပြီဟု ဆိုလိုသည်။
Parafin (ဖယောင်းဆီ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဖယောင်းဆီကိုမသုံးခင် အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
ဓါတ်မတည့်ခြင်း- ဖယောင်းဆီ၊ ၎င်းတွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်။ ဆေးနှင့်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ အညွှန်းစာတွင် ပါပါသည်။
တခြားသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ သုံးနေသောဆေးများသည် ဖယောင်းဆီနှင့် ဓါတ်ပြုမှုဖြစ်နိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Parafin (ဖယောင်းဆီ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ဖယောင်းဆီသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များအတွက်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။ သင့်၌ သံသယများ သို့မဟုတ် မေးခွန်းများရှိလျှင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် နှင့် နို့တိုက်စဉ်တွင် အကန့်အသတ်နှင့် သုံးခြင်းက ပိုကောင်းပါသည်။
သို့သော် သင့်ဆရာဝန်မှ လူတစ်ဦးစီ၏ အခြေအနေ၊ သင့်ကျန်းမာရေးကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးနောက်တွင်မှ အန္တရာယ်နှင့် အကျိုးရလဒ်ကို ချိန်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။
စိတ်ပူသည်များ သံသယများရှိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် အကြံဉာဏ်တောင်းခံ ဆွေးနွေးပါ။
Parafin (ဖယောင်းဆီ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တခြားဆေးများကဲ့သိုပင် ဖယောင်းဆီသည်လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ချို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်သည်မှာ ရှာပါးပြီး ဆေးအကူညီယူရန်လည်း မလိုအပ်တတ်ပါ။ သို့သော် ဆေးကိုအသုံးပြုပြီးနောက် ပြဿနာတစ်ခုခုရှိလာပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အမြဲတမ်းအရေးကြီးပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Parafin (ဖယောင်းဆီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဖယောင်းဆီ သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့်တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Parafin (ဖယောင်းဆီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဖယောင်းဆီ က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Parafin (ဖယောင်းဆီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဖယောင်းဆီ သည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအား ပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Parafin (ဖယောင်းဆီ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဖယောင်းဆီနှင့်ပတ်သတ်သည့် အချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးပမာဏသည် သင့်အသက်၊ လိင်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ကုသမှုအား တုန့်ပြန်မှုနှင့် တစ်ချို့သော ဆေးဝါးများတို့အပေါ် အခြေခံပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Parafin (ဖယောင်းဆီ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Parafin (ဖယောင်းဆီ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဖယောင်းဆီ ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဖယောင်းဆီ ကို သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင် သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးသုံးတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။